Redmi K20 Pro: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Dhowr usbuuc ka hor soo bandhigida Redmi K20 ayaa la xaqiijiyay, kaas oo la filayay inuu noqdo dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha. In kasta oo maalmo ka hor la shaaciyey inay dhab ahaan jiri doonaan laba nooc. Mid ka mid ah dhexdhexaad-dhexe iyo mid kale dhammaadka-sare ah. Labadaba horeyba si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay. Qaabka-dhamaadka sare waa Redmi K20 Pro, Taleefanka ugu horreeya ee sumadda qaybtan suuqan.
Redmi K20 Pro waxaa loo soo bandhigay casriga casriga ah. Intaa waxaa sii dheer, sidii ay u daadin jirtay waagii hore, wuxuu la yimaadaa kamarad hore oo is-dulsaaran, mid ka mid ah isbeddellada sanadkan ee Android, oo aan sii wadno inaan ku aragno noocyo badan. Qeybteeda dambe waxay ku imaaneysaa kamarad seddex geesood ah.
Sidan oo kale, waxaan arki karnaa taas shaashadda qalabka waxay qaadataa inta badan xagga hore. Waxay ku timaaddaa shaashad leh looxyo aad u khafiif ah oo aan lahayn darajo ama dalool. Marka dhamaadka-sare wuxuu aad ugu dhow yahay fikradda dhammaan shaashadda, taas oo aan ku aragno in badan oo ka mid ah suuqa.
1 Tilmaamaha Redmi K20 Pro
Tilmaamaha Redmi K20 Pro
Redmi K20 Pro Tani waa soo gelitaanka astaanta ee qaybta dhamaadka sare. Illaa iyo hadda waxaa nalooga tagay moodooyin hoose iyo kuwa dhexe. Taleefankan ugu horreeya ee ugu sarreeya, ma aysan gelin khatar. Awoodda ugu badan, kaamirooyinka wanaagsan, naqshad casri ah iyo iskudhafyo kala duwan. Waxaas oo dhan oo leh qiimo lacag oo noocyo yar ay bixin karaan. Kuwani waa qeexitaankiisa:
GacaliyeQalabka: Qualcomm Snapdragon 855
Kaydinta Gudaha: 64/128/256GB
Waxaad sharad ku dhigeysaa shaashad 6,39-inji ah oo taleefanka ah, oo ay saaran yihiin guddi AMOLED ah. Processor-ka, sidaan soo sheegnay bilo kahor, shirkadu waxay dooratay kuwa ugu awooda badan suuqa dhexdiisa, iyadoo Snapdragon 855 uu yahay midka la doortay. Waxa kale oo ay la socotaa isku-darka kala duwan ee RAM iyo kaydinta, si markaa isticmaale kasta u awoodi doono inuu doorto ikhtiyaarka ay sida ugu fiican u jecel yihiin. Batariga barnaamijkan 'Redmi K20 Pro' wuxuu leeyahay awood wanaagsan oo ah 4.000 Mah. Marka lagu daro processor-ka iyo Android Pie, waxaan lahaan doonnaa is-maamul aad u wanaagsan.
Kaamirooyinka ayaa ah mid kale oo ka mid ah awoodiisa. Kamerad gadaal seddex ah, 48 + 13 + 8 MP, kaas oo yimaadda iyada oo ay ku shaqeynayaan sirdoon macmal ah. Waxay noo oggolaadaan inaan sawirro waaweyn ka qaadno dhammaan noocyada xaaladaha. Sawirka hore kamaraddu waxay isticmaashaa hal shidma 20 MP. Dareeraha faraha ayaa lagu dhex daray shaashadda taleefanka, maaddaama aan wax badan ku aragno heerka ugu dambeeya ee hadda jira. Waxaan sidoo kale ku leenahay furitaanka wajiga, marka lagu daro NFC ee lacagaha moobaylka, wax aan caadi ahayn oo ku jira taleefannada badan ee Shiinaha.
Barnaamijkan 'Redmi K20 Pro' waxaa horey loogu soo bandhigay Shiinaha. Maaddaama ay dhacdo munaasabadaha kale, bilaabitaankeeda waxaa kaliya laga xaqiijiyay Shiinaha, laakiin xilligan la joogo waxba lagama xusin bilaabitaankeeda suuqyada kale. Xanta ayaa weli ku saabsan sii deynta suurtagalka ah ee caalamiga ah sida Pocophone F2. In kasta oo illaa iyo hadda aysan jirin wax xaqiijin ah oo arrintan la xiriira.
Waxaan ku iibsan karnaa saddex midab, kuwaas oo ah casaan, buluug iyo madow leh dhammeystirka fiber-ka. Sida noocyada, Redmi K20 Pro waxay la timid iskudhafyo kala duwan oo RAM ah iyo keydinta gudaha ah. Qiimahooda Shiinaha waa sida soo socota:
Qaabka leh 6 / 64GB waxaa lagu qiimeeyaa 2.499 yuan (qiyaastii 323 euro in la beddelo)
Nooca leh 6 / 128GB wuxuu ku kacayaa 2.599 yuan (qiyaastii 336 euro in la beddelo)
Nooca leh 8/128 GB waxaa lagu qiimeeyaa 2.799 yuan (qiyaastii 362 euro in la beddelo)
Qaabka leh 8/256 GB wuxuu ku kacayaa 2.999 yuan (qiyaastii 388 euro in la beddelo)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Redmi K20 Pro: Dhamaadkii ugu dambeeyay ee sumadda
Kahor intaan si rasmi ah loo soo bandhigin, Amazon waxay iibineysaa Moto Z4